Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Waxaan Nahay Muwaadinka Labaad ee Itoobiya. By: Macalinka Soomaaliyeed (MS)
Maqaal: Waxaan Nahay Muwaadinka Labaad ee Itoobiya. By: Macalinka Soomaaliyeed (MS)
Posted by ONA Admin	/ October 1, 2018
Waxaan Maqaalkan kooban ku ifin doonaa in Soomalidu tahay dad Muwaadina sida qowmiyadaha kale iyo in kale, hadaba akhriste inta aad maqaalkan indhaha la raacayso maskaxdana ka shaqaysii oo bal kor ufikir.
MAXAA LAGU GARTAA MUWAADINKA???
Muwaadin waxaan Qormadan ku qiimaynaynaa Sadex dhinac oo kala ah:-
1. Dhanka Dhaqaalaha
2. Dhanka Siyaasada
3. Arimaha bulshada iyo Adeegyada aasasiga
Bal kaliya sadexdaa Qodob(Indicator) aan yara rog rogno kolba mid aan sigaara u milicsano, Si aan u ogaano halka Soomalidu kaga jirto Dalk.
Sidaad wada ogtihiinba dhaqaalaha dalka waxaa lagu qaybsadaa Qaacido loo yaqaano GRAND FORMULA,qaacidadaas lacagaha kabista lagu qaybsado somalidu way ku dulmantahay oo 10% ayay helaan, waxaana iswaydiin mudan qaacidadan waxaa lagu qiimeeya Ilaha Dhaqaale ee Dalka iyo Tirada dadwaynaha ee Sideebuu tigree inooga badsadaa ileen labadaba waan dheer nahaye.?
Marka laga soo tago lacagaha kabista Dalku wuxuu qaybsadaa wax loo yaqaano MEGA PROJECT, oo mashaaricaha waawayna, Soomalidana 1 xabo ayaa loo qabtaa halka Tigreega ama Axmaradu kumanaan masharico wawayn helaan.
In Qowmiyadu kala Koraan waxaa sabab u ah Xisbiga talada haya oo Soomalida Dibad joog ka dhigaya, Aan kuu bisleeye Tusaale dalku haduu deeq 10 Billion ah helo, horta sideed afartaasa qaybsada labada soo hadhay kililada kale feen feentaan.
Soomalidu guud ahaan waxay ka maqan tahay Masraxa wax lagu qaybsado, waa dibad joog xogta xitaa kililada kale ayay kasii dhaga dhageyan. Ma nihin kuwa wax doorta mana nihin kuwa wax diidi kara markasta Bar madow ayaa nagu taala waxanan nahay kuwo ka takooran dadka kale .
Waxaan ka qatanahay 180 Gole dhexe oo xisbigu leeyahay,Ma noqon kartid raysal wasaare laguma dooran karo si kastood xirfad iyo aqoon uleedahay. Waa su-aal layaab lehe Somalidu miyayna Soo dagaalamin oo aysan kumanaan ku naf waayin Dagaalkii Eritria,Waa yaabe miyaanan ahayn kiwii dhargiga Ciid dhulka udaray,Ileen tigree Dhawacaan diluu jiid jiidee,Maxaa halgankeenii qariyay??? Maxaa kooda Libaax muuqda ka dhigay
Xata isbadalkan Ethiopia ka dhacay
abuubulka mucaaradka ONLF qayb weyn ayay ka qaadatay lknse lama sheegayo oroma isbadalka keentay uunbaad maqli
3.ARIMAHA BULSHADA IYO ADEEG BIXINTA
Magaran karo erayo aan kusoo koobo sida Soomalida loo bahdilay Dhaqankeeda iyo afkeedaba.Waxaa la aaminsan yahay in luuqadaada iyo dhaqan kaagu kuwa kale ka hooseeyaaan.
Waxaa taas kaaga daran Bal tusaalayaashan si fiican u milicso
@Oromia Waxaa ka jira 1000,000(Hal malyan) , Oo laamiya halka inagu haysano 1000(Kun killometer),Waa wadada isku xidha Jijiga-Wajale iyo Jijiga-Godey oo laysku geyay, Ma qiyaasi kartaa farqiga udhaxeeya??????
@Magalada Jijiga Laydh malaha,Degmooyinka nawaxigeeduna Malaha,Laydhkii la bilaabay 10 sano kahor ayaa masharicdoodii jitamayan qowmiyadaha kalena Qebele Qebelle ayuu laydhu ugaadhay,Markaasa Dalka dibadiisa loo dhoofiyaa oo waayabe Nin isagu baahan wax ma suuq geeyaa???????
@Adeegyada Mashaaricaha waawayn Sida deymaha Soomalida waxaa lagu xiraa shuruudo badan,waxaan qaata dad qowmiyado kale ah isla dhulkaagii ayay bankiga rahaamad u dhigaan WAXAANA TUSAALE KUGU FILAN GODEY WIXII KA DHACAY. Masharicihii shan sano kahor la qabtay sida Gidhibka XAMARO iyo Shiniile Dabaysha laydha ka laga dhalinayo Lacagteedii xagey martay ileen Kuwii lamid ka ahaa iyagoo 30 mashaaric helay way dhamaadeene?
ISKU SOO WADA DUUBOO SOOW MA ODHAN KARNO SOOMALIDU MA AHA MUWAADININ,LOOMANA TIX GALIYO SIDA DADKA KALE??????????